Pavlovian ကြောက်ရွံ့မှုအခြေအနေအတွက်နှစ်ရှည်မှတ်ဉာဏ်သည်နျူကလိယ Accumbens နှင့် Basolateral Amygdala (၂၀၁၀) တွင် dopamine လိုအပ်သည် - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့်ဆိပ်ပေါ်၌ရှိသည်။
FULL ဆန်းစစ်ချက်: Pavlovian ကွောကျရှံ့ခွငျးအခြေအနေများ Long-Term မှတ်ဉာဏ်အတွက်နျူကလိယ Accumbens နှင့် Basolateral Amygdala (2010) တွင် Dopamine လိုအပ်သည်
Fadok JP, Darvas M က, Dickerson TMK, Palmiter RD
(2010) ။ PLoS ONE5(9): e12751 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0012751
ယောနသန်သည် P. Fadok1,2 မာတင် Darvas2, Tavis MK Dickerson2, ရစ်ချတ်ဃ Palmiter2
Neurobiology နှင့်အပြုအမူများတွင် 1 ဘွဲ့လွန်အစီအစဉ်ဝါရှင်တန်, ဆီယက်တဲလ်တက္ကသိုလ်ဝါရှင်တန်, အမေရိကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု,
ဇီဝဓါတုဗေဒ2ဦးစီးဌာနနှင့် Howard Hughes ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအင်စတီကျု, ဝါရှင်တန်ရှိ Seattle တက္ကသိုလ်ဝါရှင်တန်, အမေရိကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
အဆိုပါ neurotransmitter dopamine (DA) တစ်ဦး Pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အတွက်သင်ယူမှုအတွက်မရှိမဖြစ်ပါပဲ ကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့် (FPS) အဖြစ်လူသိများပါရာဒိုင်း။ DA synthesize နိုင်စွမ်းချို့တဲ့ကြွက်တွေဟာအေးစက်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ကွောကျမကျ inducing footshock အကြားအသင်းအဖွဲ့သင်ယူဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ ယခင်ကကျနော်တို့ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) ၏အာရုံခံမှ DA ပေါင်းစပ်၏ပွနျလညျထူထောငျ FPS restore လုံလောက်ခဲ့ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ VTA ထံမှ DA အချက်ပြလက်ခံရရှိ mesocorticolimbic ဦးနှောက်ဒေသများ FPS များအတွက် DA လိုအပ်သည့်ဆုံးဖြတ်ရန်ပစ်မှတ်ရွေးချယ်ပြီးဗိုင်းရပ်စ်ပွနျလညျထူထောငျချဉ်းကပ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ basolateral amygdala (BLA) နှင့်နျူကလိယ accumbens (NAc) နှစ်ဦးစလုံးမှ DA ပေါင်းစပ်၏ပွနျလညျထူထောငျ FPS ၏ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်အတွက်လိုအပ်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားဒေတာကိုကွောကျရှံ့-related မှတ်ဉာဏ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းမှာပါဝင်နေတဲ့ dopamine-မှီခို circuitry သို့အရေးပါထိုးထွင်းသိမြင်သည်။
DA အဆိုပါ hypothalamus, olfactory မီးသီးများနှင့် ventral midbrain  အပါအဝင်ဦးနှောက်အတွင်း discrete အရေးပါအတွက်အာရုံခံခြင်းဖြင့်ဖန်တီးထားသည်။ ထိုကဲ့သို့သော prefrontal cortex, hippocampus, amygdala နှင့် NAc အဖြစ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်များအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်း limbic ဦးနှောက်ဧရိယာဖို့ ventral midbrain စီမံကိန်း၏ VTA အတွက် DA အာရုံခံ , ,  ။ ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အတွက် DA တစ်အခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူတသမတ်တည်း, DA အာရုံခံများ၏ပစ်ခတ်မှုနှုန်းကိုကွောကျရှံ့-inducing လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်ဆန္ဒရှိရလဒ်များ , ,  ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းတွေကိုအားဖြင့်ပြောင်းလဲနေသည်။ ထို့ပြင်ကြောက်လှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများတုံ့ပြန်အတွက်, DA အဆင့်ဆင့်အကြိမ်ကြိမ် limbic ဦးနှောက်ဒေသများတွင်တိုးမြှင့် , , ,  နှင့် DA function ကို၏ pharmacological နှင့်မျိုးရိုးဗီဇထိန်းသိမ်းရေးကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက် Paradigm အတွက်သင်ယူမှုနှောင့်အယှက်နိုငျ , , ,  ။
Pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်မှာတော့ထိုကဲ့သို့သောအလင်းအဖြစ်ကြားနေ conditional လှုံ့ဆော်မှု, ထိုကဲ့သို့သော footshock အဖြစ်ဆန္ဒရှိခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူတွဲဖြစ်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ရေးအပြီးတွင်တစ်ယောက်တည်းအေးစက်လှုံ့ဆော်မှု၏တင်ဆက်မှု  ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်တုံ့ပြန်မှု elicits ။ FPS သင်ယူမှုအတွက် acoustic ထိတ်လန့်တုန့်ပြန်  တွင် cue-ရူးနှမ်းတိုးခြင်းဖြင့်အကဲဖြတ်ထားတဲ့အတွက်လေ့အလုပ် Pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်ပါရာဒိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ယခင်က VTA အတွက် DA အာရုံခံတဲ့ FPS ပါရာဒိုင်း  အတွက်သင်ယူမှုများအတွက်လုံလောက်သောဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ။ ထို့အပွငျကြှနျုပျတို့အ BLA အတွက် DA အဆိုပါ cue-shock အသင်းအဖွဲ့များ, ရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ် (STM) ထုတ်လုပ်ရန်လုံလောက်ပေမယ့်မပေးရေရှည်မှတ်ဉာဏ် (LTM) ထိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ VTA DA အာရုံခံ၏ကျန်ရှိသောပစ်မှတ်၏, ထို NAc အကြီးဆုံး innervation အားလက်ခံတွေ့ဆုံထို့ကြောင့် FPS  ကို LTM ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း site ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
တစ်ဦးကကြီးမားတဲ့စာပေ  ဆုလာဘ်-based Paradigm အတွက်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်များများအတွက် NAc အတွင်း DA များအတွက်အခန်းကဏ္ဍထောက်ခံပါတယ်။ ဒါဟာ NAc အတွက် DA Pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အတွက်သင်ယူမှုအဘို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်ရှိမရှိလက်ရှိမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လေ့လာမှုများ DA အဆင့်ဆင့်ကြောက်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကို  တုံ့ပြန်အတွက် NAc တိုးပွါးကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင် NAc အကြီးအကျယ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောယင်း BLA ,  တစ်နျူကလိယအားဖြင့် innervated သည်, DA 18 [, , အ NAc နှင့် BLA  နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အာရုံခံ function ကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ် ] ။ ဒါကြောင့်ထိုအဒေသများနှစ်ဦးစလုံးအတွက် BLA နှင့် NAc အကြားဆက်သွယ်မှုများနှင့် DA အချက်ပြ, Pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်လိုအပ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
DA Pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အတွက် LTM များအတွက် NAc နှင့် BLA အတွက်လိုအပ်သောရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်, ငါတို့ကြောင့် loxP-flanked မှတ်တမ်း / Translational မှတ်တိုင်၏သွင်းဖို့ DA synthesize နိုင်စွမ်းကင်းမဲ့သော dopamine-လစ်လပ် (DD) mouse ကိုမော်ဒယ်၏အသုံးပြုမှုကိုဖန်ဆင်း အဆိုပါ tyrosine hydroxylase (Thfs) မျိုးဗီဇ  တွင်ကက်ဆက်။ Cre recombinase ၏ရှေ့တော်၌, DA အချက်ပြရွေးချယ်သည့်မှတ်တိုင်ကက်ဆက်၏ဖယ်ရှားရေးမှတဆင့် Thfs allele ၏ reactivity နေဖြင့်တိကျသောပစ်မှတ်ဒေသများပြန်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရွေးချယ်တစ်ယောက်တည်း NAc ဒါမှမဟုတ် NAc နှင့် BLA နှစ်ဦးစလုံးမှဖြစ်စေရန် DA restore လုပ်ဖို့ Cre recombinase ဖော်ပြတဲ့ retrogradely-လူကုန်ကူးဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များ NAc အတွက် DA နှင့် BLA FPS များအတွက် LTM ထူထောင်ဘို့လုံလောက်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
Viral-အားကယ်ဆယ် DD ကြွက်တွေအတွက် TH ၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေး
ဦးနှောက်ထဲမှာ DA FPS များအတွက် LTM ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်လိုအပ်သောသည်အဘယ်မှာရှိဆုံးဖြတ်ရန်, DA function ကို CAV2-Cre recombinase ၏ထိုးမှတဆင့် DD ကြွက်တွေမှာပကတိဖြစ်လေ၏။ ဒီ virus ရွေးချယ်အာရုံခံကူးစက်နှင့် retrogradely ဆေးထိုး၏ site  ကနေပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ DD ကြွက်တွေမှာ DA အာရုံခံတဲ့ပစ်မှတ်နျူကလိယသို့ထိုးသွင်းလိုက်လျှင်ဤဗိုင်းရပ်စ်ပိုး TH ထုတ်လုပ်မှု restore ပြန်, ပြန်ဖြင့် Th ဗီဇပြန်လည်အသက်အဆိုပါ floxed ရပ်တန့်ကက်ဆက် excises ရှိရာ ventral midbrain ၏ DA အာရုံခံမှလူကုန်ကူးနှင့်သာအမှ DA ထုတ်လုပ်မှုခွင့်ပြုပါလိမ့်မည် ရွေးချယ်ထားသည့်ပစ်မှတ်  ။ ကျနော်တို့ကြွက်နှစ်ခုသီးခြားအလိုက်၌ဤ technique ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ NAc အဆိုပါ VTA  ၏ DA အာရုံခံ၏အကြီးဆုံးပစ်မှတ်သောကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သညျဤနျူကလိယ FPS များအတွက် LTM ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်အရေးပါဖြစ်အံ့သောငှါတွေးဆ, ထို့ကွောငျ့, CAV2-Cre ၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်ထိုးတဦးတည်းဆောင်များတွင်အတွက် NAc သို့လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ငါတို့သည်လည်း DA LTM ​​များအတွက် VTA ၏မျိုးစုံပစ်မှတ်အတွက်လိုအပ်သောစေခြင်းငှါ၎င်းအယူအဆစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ဒီစမ်းသပ်ဖို့နှစ်နိုင်ငံထိုးသည့် NAc နှင့် DD ကြွက်၏ BLA နှစ်ဦးစလုံးသို့လုပ်ခဲ့ကြသည်။
Immunohistochemistry ဗိုင်းရပ်စ်-ထိုးသွင်း DD ကြွက် (ပုံ 1) တွင် TH function ကို၏ပြန်လည်အတည်ပြုဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း TH များအတွက်ခိုင်မာသောအချက်ပြ DA Transporter (DAT) (ပုံ 1A-D) နှင့်အတူပူးတွဲဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီကြောင်းထိန်းချုပ်မှုကြွက်များ၏ NAc ၌ရှိ၏။ TH ကိုလည်းထိန်းချုပ်ကြွက်များ၏ BLA (ပုံ 1E) တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်; သို့သော် DAT immunoreactivity အဆိုပါ BLA အတွက်အလွန်နိမ့်ခဲ့ထို့ကြောင့်ပြသသည်မဟုတ်။ Immunohistochemistry လည်း Non-ထိုးသွင်း DD ကြွက် (ပုံ 1 က F-J ကို) မှဦးနှောက်တစ်သျှူးအပေါ်ကောက်ယူခဲ့သည်။ (ပုံ 1H ငါ) အဲဒီမှာ NAc (ပုံ 1F, G) တွင်အဘယ်သူမျှမရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. TH ​​signal ကိုကြီးသေး DAT အစွန်းအထင်းပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ DD ကြွက်များ၏ BLA လည်း TH အစွန်းအထင်း (ပုံ 1J) ၏အဓိကအားကငျးမဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။
Viral-ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ DD ကြွက်တွေမှာ TH ၏ရွေးချယ်ပွနျလညျထူထောငျ။
NAc-ထိုးသွင်း DD ကြွက်တွေကနေ Immunohistochemistry TH အဆိုပါ NAc (ပုံ 1K-N) တို့၏ကြီးမားသောအတိုင်းအတာအထိပကတိဖြစ်လေ၏ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. TH ​​NAc-ထိုးသွင်း DD ကြွက်များ၏ BLA (ပုံ 1O) တွင်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည်။ အဆိုပါ NAc နှင့် BLA ရန်နှစ်ချက်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် NAc (ပုံ 1P-S က) နှင့် BLA အတွက်ခိုင်မာတဲ့ TH signal ကို (ပုံ 1T) တွင် TH များအတွက်အားကောင်းတဲ့အချက်ပြမှုခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားဒေတာ CAV2-Cre ၏ဗိုင်းရပ်စ်ဆေးထိုးထိုးသွင်းဦးနှောက်ဒေသများမှတိကျတဲ့ TH စကားရပ်၏ပွနျလညျထူထောငျမှာမြင့်မားထိရောက်သောခဲ့ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
TH ၏ဗိုင်းရပ်စ်ကယ်ဆယ်ရေးထိုးသွင်း DD ကြွက်တွေမှာ DA ၏ပွနျလညျထူထောငျဖို့ဦးဆောင်ကြောင်းအတည်ပြုရန်ကျနော်တို့ DA metabolites နှင့် norepinephrine အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်မှုအရည် Chromatography (; စားပွဲတင် 1 HPLC) ကိုသုံးပြီး, DA quantified ။ ဒီစမ်းသပ်မှုများအတွက်ကျနော်တို့ DA စီမံကိန်း၏တဦးတည်းပစ်မှတ်အတွက် TH ကယ်ဆယ်ရေးအခြား non-ထိုးသွင်းဒေသတွင်း၌ DA အဆင့်ဆင့်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမယ်ဆိုရင်လည်းဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့ NAc ဒါမှမဟုတ် amygdala ဖြစ်စေအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ dopamine-ကုန်ခမ်း DD ကြွက်တွေဟာ amygdala အတွက်ထိန်းချုပ်မှုအဆင့်ဆင့်၏ NAc နှင့် 0.51% အတွက်ထိန်းချုပ်မှု DA အဆင့်ဆင့်၏ 1.39% ရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ NAc-ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ DD ကြွက်တွေဟာ NAc အတွက်ထိန်းချုပ် 34.0% ခဲ့ DA အဆင့်ဆင့်ရှိခဲ့; သေး amygdala အတွက် DA အဆင့်ဆင့်ကို non-ထိုးသွင်း DD အဆင့်ဆင့် (1.57%) ကဲ့သို့တူညီသောခဲ့ကြသည်။ Amygdala-ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ DD ကြွက်ထိန်းချုပ်မှု 38.4% သော amygdala အတွက် DA အဆင့်ဆင့်ခဲ့သေး NAc အတွက် DA အဆင့်ဆင့်ကို non-ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ DD အဆင့်ဆင့် (0.46%) ကဲ့သို့တူညီသောခဲ့ကြသည်။ ဤရလဒ်သည် TH ၏ဗိုင်းရပ်စ်-mediated ကယ်ဆယ်ရေး DD ကြွက်ထိုးသွင်းပစ်မှတ်ဒေသများတွင်မွငျ့မား DA အဆင့်ဆင့်မှဦးဆောင်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ထို့ပြင် NAc သို့မဟုတ် amygdala ဖြစ်စေသို့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ဆေးထိုးအခြားပစ်မှတ်အတွက် DA အဆင့်ဆင့်၏မြင့်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမပေးခဲ့ပါဘူး။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့  TH DD ကြွက်၏ noradrenergic အာရုံခံအတွင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်ကို ထောက်. ,  ကျနော်တို့ noradrenergic axon မှ DD ကြွက်များတွင် BLA ၏ IHC တွင်တွေ့မြင် TH ၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုစွပ်စွဲ။ Non-ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ DD ကြွက်များ၏ BLA အတွက် norepinephrine ၏ရှေ့မှောက်တွင် HPLC (စားပွဲတင် 1) နဲ့အတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့သည်။
DA, NE နှငျ့ DA metabolites ၏ HPLC အရေအတွက်။
Dopamine Long-Term Memory ကိုများအတွက် NAc နှင့် BLA အတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်
ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်စေသောတုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုသည် Pavlovian အေးစက်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးအေးစက်သောလှုံ့ဆော်မှုသည် acoustic တုန်လှုပ်စေသောတုံ့ပြန်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ DA ကို NAc သို့သာ NAc နှင့် BLA သို့ပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်းသည် acoustic startle response ကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိစေရန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် DD ကြွက်များကိုကယ်တင်ရန်တုန်လှုပ်စေသောတုံ့ပြန်မှုခါးဆစ်များထုတ်ပေးသည် (ပုံ - ၂) ။ ကှဲလှဲ၏ Two- လမ်းထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (RM ANOVA) အသံပြင်းထန်မှု (F (15) = 2, p <4,172) ၏သိသာထင်ရှားသောအကျိုးသက်ရောက်မှု, ဒါပေမယ့်ကုသမှုအပြန်အလှန်အားဖြင့်အဘယ်သူမျှမအုပ်စုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ DA လုပ်ဆောင်ချက်၏အယောင်ဆောင်မှုများသည် FPS ကိုထိခိုက်နိုင်သော sensorimotor gating တွင်ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ [37.1] sensorimotor gating ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်, အားလုံးကြွက်တစ် prepulse တားစီး (PPI) ပါရာဒိုင်း (ပုံ 0.01B) တွင်မျိုးစုံအဆင့်ဆင့်မှာစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ prepulse ပြင်းထန်မှု (RM ANOVA က F (15) = 26, p <2) ၏သိသာထင်ရှားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုပေမယ့်ကုသမှုအပြန်အလှန်အားဖြင့်အဘယ်သူမျှမအုပ်စုတစ်စုရှိခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်မှုကိုင်တွယ်မှုကြောင့်ဖြစ်သည့် NAC သို့မဟုတ် NAc နှင့် BLA သို့ DA အချက်ပြမှု၏ကယ်တင်ခြင်းသည် acoustic တုန်ခါမှုတုံ့ပြန်မှုသို့မဟုတ် sensorimotor တံခါးပေါက်ကိုမပြောင်းလဲကြောင်းပြသသည်။ ပုံ ၂ သည် DA နှင့် NAc နှင့် BLA နှစ်ခုလုံးသို့ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းသည် FPS အတွက် LTM အတွက်လုံလောက်သည်။ ကြွက်များကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းအေးစက်သည့်စံနမူနာကိုပြခဲ့သည် (ပုံ 2,86C) ။ လေ့ကျင့်နေစဉ်အတွင်းကြွက်များကိုစမ်းသပ်မှု ၃၀ ပေးခဲ့သည်။ ၁၀ စက္ကန့်အလင်း cue ကိုခြေထောက်အနည်းငယ်သာ (57.79 sec, 0.01 mA) နှင့်တွဲထားသည်။ ရေတိုမှတ်ဉာဏ် (STM) ကို ၁၀ မိနစ်အကြာတွင်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး LTM ကို ၂၄ နာရီအကြာတွင်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ အေးစက်မတိုင်မီအုပ်စုများအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှိခဲ့သည်။ လေ့ကျင့်မှုအပြီးတွင် STM သည် DD ကြွက်များတွင်လုံးဝပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီး NAc နှင့် BLA သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ NAc- ထိုးဆေး DD ကြွက်များတွင် STM သည်ချို့ယွင်းချက်ရှိသော်လည်းဤအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အရေးပါမှုကိုမရရှိခဲ့ပါ။ သို့သော်၎င်းတို့တွင်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်များထက် LTM သိသိသာသာနည်းသည် (p <2; Bonferroni posttest) ။ LTM သည် NAc နှင့် BLA နှစ်ခုစလုံးသို့နှစ်မျိုးနှစ်စားထိုးသွင်းသည့် DD ကြွက်များတွင်အဆင့်အတန်းများကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ခြေထောက်နှင့် ပတ်သက်၍ အပြုအမူအားတုံ့ပြန်မှုတွင်အုပ်စုများအကြားသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုများမရှိပါ (ပုံ 2D) ။ ဤအချက်အလက်များက NAc နှင့် BLA ရှိ DA များသည် FPS အတွက် LTM ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်ဟုဖော်ပြသည်။
DA , ,  စုစည်းပြီးနှင့်ထိုကဲ့သို့သော amygdala အဖြစ် key ကို limbic ဦးနှောက်ဒေသများတွင် LTM ၏ဖွဲ့စည်းခြင်း, NAc နှင့် hippocampus လွယ်ကူချောမွေ့ရန်စဉ်းစားနေသည်, ယခင်ကလေ့လာမှုတွေ [Pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အတွက် DA များအတွက်အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခဲ့ကြ 13] ။ ယခင်ကကျွန်တော် DA တစ် FPS ပါရာဒိုင်းအတွက်မှတ်ဉာဏ်သဲလွန်စတည်ငြိမ်များအတွက်အရေးပါကြောင်းကိုသရုပ်ပြ  ။ ထို့ပြင် VTA ကနေထွက်ရှိတဲ့ mesocorticolimbic circuit ကိုမှ DA function ကို၏ပွနျလညျထူထောငျ FPS များအတွက် STM နှင့် LTM restore လုံလောက်ခဲ့သေးတစ်ယောက်တည်း BLA မှပွနျလညျထူထောငျသာ STM  ပြန်၏။ သို့သော်သင်ယူမှု၏ဤအမျိုးအစားတွင် LTM ဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်လိုအပ်သော DA လုပ်ဆောင်ချက်၏ဆိုဒ်များမသိသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ NAc နှင့် BLA မှ DA ပေါင်းစပ်၏ပွနျလညျထူထောငျ FPS များအတွက် LTM များအတွက်လုံလောက်သောကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ NAc မှထုတ်လုပ်တဲ့ DA အာရုံခံမှ TH ၏ပွနျလညျထူထောငျ BLA ပွနျလညျထူထောငျ , သို့မဟုတ် BLA နှင့် NAc နှစ်ဦးစလုံးမှပွနျလညျထူထောငျအဖြစ် STM ကယ်တင်မှာအဖြစ်ထိရောက်သောမဟုတ်ခဲ့လည်းရှာပါ။ ဒါက NAc STM ထက် LTM ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းပိုမိုအရေးကြီးသောဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြုထားသည်။
အဆိုပါဗိုင်းရပ်စ်ကိုပွနျလညျထူထောချဉ်းကပ်ဖို့တစ်ခုမှာအလားအလာအတွက်အသိပေးချက် DA အာရုံခံတစ်ဦးထက်ပိုပစ်မှတ်ဖို့အာမခံစီမံချက်များပေးပို့နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် NAc သို့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးထိုးသွင်းသည့် BLA ရန်, TH restore နှင့်ဖြင့် DA နိုင်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ immunohistochemistry ရလဒ်များ DA အာရုံခံအဆိုပါ NAc innervating ကြောင်းအကြံပြုကြောင်းဒေသတွင်း၌သာ staining TH တိုးမြှင့်တဦးတည်းကဦးနှောက်ဒေသမှာရှိတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးထိုးသွင်းကြောင့် BLA innervating ရှိသူများအနေဖြင့်တစ်ဦးကွဲပြားသောလူဦးရေဖြစ်ကြသည်။ DA အဆင့်ဆင့်ဟာ amygdala အတွက် NAc-ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ DD ကြွက်နှင့်မ၏ NAc အတွက်ခြီးမွှောကျနေကြသည်ကြောင့် HPLC ရလဒ်များကိုဤဆင်ခြေကိုခိုင်ခံ့စေ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်အနာဂတ်ပစ်မှတ်အပေါ်အခြေခံပြီး DA အာရုံခံ၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောစူးစမ်းကြပြီမြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများ , , ,  နှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။
Pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်များအတွက် NAc နှင့် BLA နှစ်ဦးစလုံးအတွက် DA ဘို့လိုအပ်ကြောင်းအခြေခံအဆိုပါ circuitry နှင့်ယန္တရားများမဖြေရှင်းနိုင်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ Intriguingly, အ BLA , အ NAc  မှပရိုဂျက်ပို့ပေးနှင့်ဤ synapses  ရေရှည်အလားအလာ, သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်တစ် key ကိုဆယ်လူလာ Correlate ခံယူနိုင်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, DA , အ BLA နှင့် NAc အတွက် LTP  နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ ထို့ကြောင့် Pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်နေစဉ်အတွင်းက BLA အတွက် DA DA အဆိုပါ NAc စက်ရုံများရှိနေစဉ် , ,  သည်, NAc  မည်သည့်စီမံကိန်းကိုသူတို့အားဆဲလ်တွေအပါအဝင် glutamatergic ပိရမစ်ကြီးဆဲလ်လှုပ်ရှားမှုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင် NAc synapses မှ BLA ၏ LTP, အားဖြင့် LTM ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းမြှင့်တင်ရန်။ FPS များအတွက် BLA နှင့် NAc အတွက် DA-မှီခိုဖြစ်ရပ်များ၏တိကျသောအချိန်ကိုက်ဆုံးဖြတ်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုမြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
အားလုံးကြွက်ကြွက်နှင့်အတူကျန်းမာရေးနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအမျိုးသား Institutes အားဖြင့်သာတည်လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီပြုမူဆက်ဆံခဲ့ကြသည်တက္ကသိုလ်ဝါရှင်တန်၏ Institutional တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီ (2183-02) ကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ DD ကြွက်  ထုတ်ပေးခဲ့ကြသည်။ အတိုချုပ်, DD (Thfs / fs; DbhTh / +) ကြွက်တွေနဲ့ Cre recombinase အားဖြင့်ပြန်လည်သက်ဝင်နိုင်သည့်နှစ်ခု inactivated tyrosine hydroxylase (Th) alleles သယ်။ DD ကြွက်  တဦးတည်းနဂိုအတိုင်း dopamine β-hydroxylase norepinephrine ၏ပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ခွင့်ပြုပါရန် Th ဗီဇ၏လျာထားသောသွင်းနှင့်အတူ (Dbh) allele နှင့်တဦးတည်း Dbh allele  ရှိသည်။ ထိန်းချုပ်ရေးတိရိစ္ဆာန်များအနည်းဆုံးနဂိုအတိုင်း Th allele နှင့်တစ်နဂိုအတိုင်း Dbh allele သယ်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက် 2-6 လအသက်အရွယ်အကြားအပြုအမူစမ်းသပ်ခြင်းအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ နှင့်ရေရရှိနိုင်သည့်ကြော်ငြာ libitum; အစားအသောက်နှင့်အတူအပူချိန်-controlled ပတ်ဝန်းကျင်တွင်သံသရာ (PMI ထည့်သွင်းမှုများ, စိန့်လူးဝစ်, MO ကို 12LJ12): အားလုံးကြွက်တစ်ဦး55 (မှောင်မိုက်အလင်း) အရသျောခဲ့ကြသည်။ အားလုံးအမူအကျင့်စမ်းသပ်ချက်အလငျးသံသရာကာလအတွင်းကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ DD ကြွက်ပြင်းထန်စွာ hypophagic ကြောင့်သူတို့3နှင့်အတူ (intraperitoneally) နေ့စဉ်ထိုးသွင်းခဲ့4မှာ 50-dihydroxy-L-phenylalanine (L-Dopa) Post-Natal နေ့၌ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်စတင်μl / g 33 တစ်အသံအတိုးအကျယ်မှာ / ကီလိုဂရမ် MG 10  ။ သူတို့နောက်ထပ် L-Dopa ကုသမှုမပါဘဲလုံလောက်စွာစားသုံးနိုငျသည်အထိဗိုင်းရပ်စ်ဆေးထိုးပြီးနောက်, DD ကြွက် L-Dopa ၏နေ့စဉ်ဆေးထိုးနှင့်အတူထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။
Isoflurane (1.5-5%) - ထုံဆေးကြွက်တစ်ဦး stereotaxic တူရိယာ (ဒါဝိဒ်သည် Kopf တူရိယာ, Tujunga,, CA) သို့နေရာချပေးခဲ့သည်။ နျူကလီးယပ်အတွက် Th ဗီဇ function ကို၏ပွနျလညျထူထောငျတစျယောကျတညျး accumbens အဘို့, (2 × 2.1 အမှုန် / ml မှာ titered) recombinant CAV1012-Cre ဗိုင်းရပ် (မြန်မာနိုင်ငံသမီလီမီတာအတွက်သြဒီနိတ်ထိုးသွင်းခံခဲ့ရ: Bregma, midline မှနှစ်ဦးနှစ်ဖက် 1.7, Bregma မှ 0.75 ventral မှ 4.75 anterior; DD နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်သို့ 0.5 μl / hemisphere) ။ အဆိုပါ NAc နှင့် BLA မှ DA ၏နှစ်ဆပွနျလညျထူထောငျဘို့, CAV2-Cre ဗိုင်းရပ်စ်အထက်တွင်သကဲ့သို့, NAc သို့မြန်မာနိုင်ငံသထိုးသွင်းခံခဲ့ရနှင့်မီလီမီတာအတွက် BLA (သြဒီနိတ်: Bregma, midline မှနှစ်ဦးနှစ်ဖက် 1.5, Bregma မှ 3.25 ventral မှ5posterior; 0.5 μl DD နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်များတွင် / hemisphere) ။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကို၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်  ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ Micro-ပြုတ်ရည်စုပ်စက် (WPI, Sarasota, FL) မှပူးတွဲပါတစ်ဦး 10-gauge ပြွတ်အပ် (Hamilton က, Reno, NV) ကို သုံး. တစ် 32-မိကာလအတွင်းထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးတည်း NAc နှင့်နှစ်ဆကယ်ဆယ်ရေးအလိုက်ထံမှထိန်းချုပ်ရေးကြွက်အုပ်စုတစ်စုသို့ပြုစုခဲ့ကြသည်နှင့်မည်သည့်အမူအကျင့် parameter သည်အတွက်ကွာခြားခဲ့ပါဘူး။
ဖော်ပြထားသကဲ့သို့အသံ-attenuating ထိတ်လန့်အခန်းများ (SR-Lab မှ, San Diego မှတူရိယာ, San Diego မှ,, CA) , prepulse တားစီးတိုင်းတာတုံ့ပြန်မှု startle ကြောက်-potentiated ထိတ်လန့်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ တုန့်ပြန်၏အထွတ်အထိပ်လွှဲခွင်, prepulse တားစီးတွက်ချက်တုံ့ပြန်မှု, ကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်ခြင်း, ထိတ်လန့် reactivity ကို startle ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အသံအဆင့်ဆင့်အသံ level ကိုစာဖတ်သူ (RadioShack, Fort Worth, TX) သုံးပြီးစစ်ဆေးအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကစံကိုက်ညှိယူနစ်အတွက်ထိတ်လန့်တုန့်ပြန်ဖတ် (San Diego မှတူရိယာ, San Diego မှ,, CA) ၏သမာဓိသေချာစေရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦး 8-ဝပ်အလင်းတစ် cue အဖြစ်အသုံးပြုမှုအတွက်ထိတ်လန့်အကွက်၏နောက်ဘက်နံရံပေါ်မှာတပ်ဆင်ထားခဲ့သည်။
5 စက္ကတစ်ခု ITI အတူ 10 dB ရန်, null ကနေအသံမရှိခဲ့သည်ရသော: တစ် 105-မိလေ့ကာလအပြီးတွင်တိရိစ္ဆာန်များအသံကသွေးခုန်နှုန်းအဆင့်ဆင့်မြင့်တက်နှင့်အတူစမ်းသပ်မှုတွေ၏ 30 စီးရီးနဲ့အတူတင်ဆက်ခဲ့ကြသည်။ အားလုံးသံကိုပဲမျိုးစုံ 40 msec ခဲ့ကြသည်။
ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ PPI  တိုင်းတာခဲ့သည်။ အတိုချုပ်တစ်ဦးလေ့ကာလအတွင်းအောက်ပါ, ကြွက် 5, 40-msec, 120-dB, သွေးခုန်နှုန်း-တစ်ဦးတည်းစမ်းသပ်မှုတွေနှင့်အတူတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ကြွက်ထို့နောက်ထိတ်လန့်သွေးခုန်နှုန်း-တစ်ဦးတည်းအစမ်းသုံး, သုံး prepulse စမ်းသပ်မှုတွေ (50,5နှင့်နောက်ခံအထက်တွင် 10-dB) ၏တဦးတည်း, သို့မဟုတ်လုံးဝမ acoustic လှုံ့ဆော်မှုရှိခဲ့သည့်အတွက်တရားမဝင်သောရုံးတင်စစ်ဆေးဖြစ်စေ၏ 15 စမ်းသပ်မှုတွေနှင့်အတူတင်ပြခဲ့ကြသည်။ [100 × (သွေးခုန်နှုန်း-တစ်ဦးတည်းရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ် prepulse ရုံးတင်စစ်ဆေး / ပျမ်းမျှအားထိတ်လန့်တုန့်ပြန်ပေါ်ပျမ်းမျှအားထိတ်လန့်တုန့်ပြန်)]% တားစီး =: Prepulse တားစီးအောက်ပါပုံသေနည်းကိုသုံးပြီးတစ်ဦးချင်းစီ prepulse အဆငျ့အဘို့တွက်ချက်ခဲ့သည်။
ဖော်ပြထားသကဲ့သို့အားလုံးကြွက်  က 12 ရက်ကြာ FPS ပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ အတိုချုပ်, အခြေခံပေါ်တွင်ကြွက်တစ်ဦး Pseudo-ကျပန်း 20 စမ်းသပ်မှုတွေ၏စီးရီးအမိန့်ပေးထားခဲ့သည်, cue နှင့်မျှမ-cue အခြေအနေများအကြားအညီအမျှခွဲ။ တစ်ရက်2တွင်, ကြွက်တစ်ဦး 30-MA, 2-စက္က footshock အတူ 10-စက္က cue အလင်း၏ 0.2 ကွန်မြူနစ်ဝါဒ (0.5 မိယုတ် ITI) ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါကြွက်ထို့နောက်ရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်အဘို့စမ်းသပ်မတိုင်မီ 10 မိဘို့မိမိတို့နေအိမ်လှောင်အိမ်သို့ထားရှိခဲ့ကြသည်။ တစ်ရက်3တွင်, LTM အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ [1 × (cue စမ်းသပ်မှုတွေ / မ cue စမ်းသပ်မှုတွေ-100 အပေါ်တုံ့ပြန်မှု၏ပျမ်းမျှတုံ့ပြန်မှု၏ပျှမ်းမျှ)]% အလားအလာ = အောက်ပါပုံသေနည်းကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်တွက်ချက်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ mouse ကိုဦးနှောက်တစ်သျှူး  စံနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. histological ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ အခမဲ့-floating Coronal အပိုင်း (30 μm) ယုန် Anti-TH (1 2000, Millipore) နှင့်ကြွက်ဆန့်ကျင် DAT (1 1000, Millipore) ပဋိနှင့်အတူ immunostained ခဲ့ကြသည်။ secondary ပဋိ Cy2- သို့မဟုတ် Cy3- conjugation (1 200, ဂျက်ဆင် ImmunoResearch) ဖြစ်စေခဲ့ကြသည်။ ဓာတ်ပုံတွေဖြောင့်မတ် brightfield ဏု (Nikon ကင်မရာ) ဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
high-performance ကိုအရည် Chromatography
ကြွက် Beuthanasia (250 mg / kg) နဲ့ euthanized ခဲ့ကြသည်, ပြီးတော့ဦးနှောက်ကိုဖယ်ရှားကာရေခဲ-အအေးစကျင်ကျောက်ပြားပေါ်တွင်ထားရှိခဲ့ကြသည်။ မောက်ဦးနှောက် matrix ကို (active စနစ်များ, Warrren, MI) ကိုသုံးပြီး, 1-မီလီမီတာအထူချပ်ဟာ NAc သို့မဟုတ် amygdala မှတဆင့်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ တစ်ရှူးလာကြတယ် (1-မီလီမီတာအချင်း), ထို့နောက်ယူ 1.7 mL microcentrifuge ပြွန်သို့ထားရှိများနှင့်လျင်မြန်စွာအရည်နိုက်ထရိုဂျင်အတွက်အေးခဲခဲ့ကြသည်။ သူတို့ဆန်းစစ်ဘို့ Neurochemistry Core Lab မှ (Molecular အာရုံကြောသိပ္ပံသုတေသန Venderbilt တက္ကသိုလ်စင်တာ) မှအပူပိုင်းရေခဲပြင်ပေါ်တင်ပို့မှီတိုင်အောင်နမူနာ -80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထားခဲ့ကြသည်။
စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ GraphPad Prism ကို software ကို (California, La Jolla) ကို အသုံးပြု. ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ mouse ကိုကိုလိုနီပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အပေါ်အထောက်အကူဖြစ်စေမှတ်ချက်များဘို့လာရီ Zweifel, Glenda Froelick နှင့်အဲလ်ဘတ်ကင်တားနားတစ်သျှူးဆိုင်ရာဘာသာရပ်အပေါ်အကူအညီနဲ့ဘို့နှင့် Valerie အမှတ်တရကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်း CAV2 ဒေါက်တာ Miguel Chillon (ဘာစီလိုနာ၏Universität Autonoma မှာ CBATEG ၏ Vector ထုတ်လုပ်မှုယူနစ်) ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့မှု - ဤစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုအမျိုးသားကျန်းမာရေးအထွေထွေသိပ္ပံဌာနမှအထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံနှင့် NIH အမျိုးသားအင်စတီကျုအဖွဲ့မှ Grant 32 R07270 GM4- Howard Hughes Medical Institute၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှု၊ အမျိုးသားသုတေသန ၀ န်ဆောင်မှုဆု၊ T25 GM058501 မှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထောက်ခံခဲ့သည်။ 05 ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့သူများသည်လေ့လာမှုပုံစံ၊ အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊
1 ။ Bjorklund တစ်ဦးက, Dunnett SB ။ ဦးနှောက်အတွက် Dopamine အာရုံခံဆဲလျစနစ်များ: update တစ်ခု။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2007; 30: 194-202 ။ [PubMed]
2 ။ fields HL, Hjelmstad GO, Margolis eb, Nicola သည် SM ။ သင်ယူစာစားချင်စိတ်ကိုအမူအကျင့်များနှင့်အပြုသဘောအားကောင်းအတွက် Ventral tegmental ဧရိယာတွင် neuron ။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 2007; 30: 289-316 ။ [PubMed]
3 ။ Pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်၏ Maren အက်စ် Neurobiology ။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 2001; 24: 897-931 ။ [PubMed]
4 ။ Brischoux က F, Chakraboty, S, Brierley ပစ, Ungless MA ။ noxious လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် ventral VTA အတွက် dopamine အာရုံခံ၏ Phasic စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2009; 106: 4894-4899 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
5 ။ Guarraci အက်ဖ်အေ, Kapp BS ။ အဆိုပါနိုးယုန်အတွက် differential ကို pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်နေစဉ်အတွင်း ventral tegmental ဧရိယာ dopaminergic အာရုံခံတစ်ခု electrophysiological စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 1999; 99: 169-179 ။ [PubMed]
6 ။ ယောရှုသည် M က, Adler တစ်ဦးက, Mitelman R ကို, Vaadia အီး, Bergman အိပ်ချ် Midbrain dopaminergic အာရုံခံခြင်းနှင့် striatal cholinergic interneurons ဆုလာဘ်များနှင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာဂန္ထဝင်အေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေ၏ကွဲပြားခြားနားသောယုဂ်မှာဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များအကြားခြားနားချက်ဝှက်။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 11673-11684 ။ [PubMed]
7 ။ Abercrombie ED, Keefe Ka, DiFrischia DS, Zigmond MJ ။ အတွက် Vivo striatum အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်, နျူကလိယ accumbens နှင့်တိုကျရိုကျ cortex medial အပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Differential ။ J ကို Neurochem ။ 1989; 52: 1655-1658 ။ [PubMed]
8 ။ Inglis FM ရေ, အ amygdala ၏ Moghaddam ခ Dopaminergic innervation စိတ်ဖိစီးမှုမှအလွန်အမင်းတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ J ကို Neurochem ။ 1999; 72: 1088-1094 ။ [PubMed]
9 ။ Kalivas PW, စိတ်ဖိစီးမှုအားဖြင့်နျူကလိယ accumbens ၏ shell ကိုအတွက် dopamine ဂီယာ၏ Duffy P. ရွေးချယ် activation ။ ဦးနှောက် Res ။ 1995; 675: 325-328 ။ [PubMed]
10 ။ Pezze MA, Heidbreder, CA, Feldon J ကို, Murphy က CA. ရွေးချယ်နျူကလိယ၏တုံ့ပြန်အေးစက် Contextual နှင့် discrete လှုံ့ဆော်မှု aversively မှ core နဲ့ shell ကို dopamine accumbens ။ neuroscience ။ 2001; 108: 91-102 ။ [PubMed]
11 ။ de Oliveira AR, Reimer AE, Brandao ML ။ conditional ကြောက်စိတ်ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတွက် Dopamine D2 အဲဒီ receptor ယန္တရားများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2006; 84: 102-111 ။ [PubMed]
12 ။ Fadok JP, Dickerson TM, Palmiter RD ။ Dopamine cue-မှီခိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်ဘို့လိုအပ်ပေသည်။ J ကို neuroscience ။ 2009; 29: 11089-11097 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
13 ။ Pezze MA, ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အတွက် Feldon ဂျေ Mesolimbic dopaminergic လမ်းကြောင်း။ prog Neurobiol ။ 2004; 74: 301-320 ။ [PubMed]
14 ။ Ponnusamy R ကို, Nissim HA, D2 ကဲ့သို့ dopamine receptors ၏ Barad အမ်စနစ်ပိတ်ဆို့ကြွက်တွေမှာ conditional ကြောက်စိတ်မျိုးသုဉ်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2005; 12: 399-406 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
15 ။ Koch အမ်ထိတ်လန့်ခြင်း၏ neurobiology ။ prog Neurobiol ။ 1999; 59: 107-128 ။ [PubMed]
16 ။ Sesack SR, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို။ Cortico-Basal Ganglia ဆုလာဘ်ကွန်ယက်ကို: microcircuitry ။ Neuropsychopharmacology ။ 2010; 35: 27-47 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
17 ။ McGaugh JL ။ အဆိုပါ amygdala စိတ်ခံစားမှုအတွေ့အကြုံများကိုနှိုးဆွ၏အမှတ်တရများ၏စုစည်းပြီး modulates ။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 2004; 27: 1-28 ။ [PubMed]
18 ။ Bissiere S က, Humeau Y ကို, feedforward တားစီးနှိပ်ကွပ်ခြင်းဖြင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် amygdala အတွက် Luthi အေ Dopamine တံခါးတို့ LTP သော induction ။ နတ် neuroscience ။ 2003; 6: 587-592 ။ [PubMed]
19 ။ Kroner က S, Rosenkranz ဂျာကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို, Barrionuevo G. အ Dopamine စသည်တို့အတွက် basolateral amygdala အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် modulates ။ J ကို Neurophysiol ။ 2005; 93: 1598-1610 ။ [PubMed]
20 ။ Marowsky တစ်ဦးက, Yanagawa Y ကို, Obata K သည်, Vogt Ke ။ interneurons ၏အထူးပြု subclass amygdala function ကို၏ dopaminergic ပံ့ပိုး mediates ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 48: 1025-1037 ။ [PubMed]
21 ။ ဝံပုလွေ ME, Sun က X ကို, Mangiavacchi S က, Chao SZ ။ Psychomotor စိတ်ကြွဆေးနှင့်အာရုံခံ plasticity ။ Neuropharmacology ။ 2004; 47 (ပျော့ပျောင်း 1): 61-79 ။ [PubMed]
22 ။ Hnasko TS, ဖာရအက်ဖ်အေ, Scouras အေဒီ, Stoll EA ၏, Gale SD, et al ။ dopamine-လစ်လပ်ကြွက်တွေမှာ nigrostriatal dopamine ၏ Cre recombinase-mediated ပွနျလညျထူထောငျ hypophagia နှင့် bradykinesia နောက်ကြောင်းပြန်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2006; 103: 8858-8863 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
23 ။ Soudais ကို C, Laplace-Builhe ကို C, Kissa K ကို Kremer EJ ။ ခွေးတစ်ကောင်ကို adenovirus Vector နှင့် Vivo ၌မိမိတို့အကျိုးရှိစွာ retrograde သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနေဖြင့်အာရုံခံ၏ဦးစားပေး transduction ။ FASEB ဂျေ 2001; 15: 2283-2285 ။ [PubMed]
24 ။ Szczypka က MS, Rainey MA, Kim က DS, Alaynick WA, Marck BT, et al ။ dopamine-လစ်လပ်ကြွက်များတွင်အပြုအမူသည်ကျက်စားလျက်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1999; 96: 12138-12143 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
25 ။ zhou QY, Palmiter RD ။ Dopamine-လစ်လပ်ကြွက်, ပြင်းထန်စွာ hypoactive adipsic ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, aphagic ။ cell ။ 1995; 83: 1197-1209 ။ [PubMed]
26 ။ Swerdlow ရော်ဘာ, Braff DL, Geyer MA ။ လစ်လပ် sensorimotor Gates ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ: ငါတို့သည်ကိုယ်သိထင်သောအရာကိုအဘယ်အရာကိုကြှနျုပျတို့သိ, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကျနော်တို့မကြာခင်သိရန်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပြုမူနေ Pharmacol ။ 2000; 11: 185-204 ။ [PubMed]
27 ။ LaLumiere RT ကို, Nawar EM, McGaugh JL ။ အဆိုပါ basolateral amygdala သို့မဟုတ်နျူကလိယအားဖြင့်မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီး၏ Modulation shell ကိုနှစ်ဦးစလုံးဦးနှောက်ဒေသများတွင်တစ်ပြိုင်တည်းပါ dopamine အဲဒီ receptor activation လိုအပ်ပါတယ် accumbens ။ Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2005; 12: 296-301 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
28 ။ နျူကလီးယပ်အတွင်း Manago က F, Castellanos ကို C, Oliverio တစ်ဦးက, Mele-A, dopamine receptors Subtype, D1 တူသောနှင့် D2 ကဲ့သို့၏ De Leonibus အီးအခန်းက္ပ, တ-ရုံးတင်စစ်ဆေး inhibitory ရှောင်ရှားခြင်းအတွက်မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီးပေါ်ငျဒသေ, core နဲ့ shell ကို accumbens အလုပ်တခုကို။ Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2009; 16: 46-52 ။ [PubMed]
29 ။ Rossato JI, Bevilaqua LR, Izquierdo ငါမက်ဒီနာ JH, Cammarota အမ် Dopamine ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်သိုလှောင်မှုဇွဲကိုထိန်းချုပ်ထား။ သိပ္ပံ။ 2009; 325: 1017-1020 ။ [PubMed]
30 ။ Lammel S က, Hetzel တစ်ဦးက, Hackel အို et al ဂျုံးစ်ငါ Liss B က။ တစ် dual-mesocorticolimbic dopamine သည့်စနစ်အတွင်း mesoprefrontal အာရုံခံ၏ထူးခြားတဲ့ဂုဏ်သတ္တိ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008; 57: 760-773 ။ [PubMed]
31 ။ Ford ကားက CP, မာကုမိသားစုဆရာဝန်, Williams က JT ။ Properties ကိုနှင့် mesolimbic dopamine အာရုံခံ၏ opioid တားဆီးခြင်းပစ်မှတ်တည်နေရာအရသိရသည်ခြားနားသည်။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 2788-2797 ။ [PubMed]
32 ။ Margolis eb, Lock ကို H ကို, Chefer VI ကို, Shippenberg TS, Hjelmstad GO, et al ။ Kappa opioids ရွေးချယ်သည့် prefrontal cortex မှထုတ်လုပ်တဲ့ dopaminergic အာရုံခံထိန်းချုပ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2006; 103: 2938-2942 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
33 ။ Margolis eb, Mitchell က JM, Ishikawa J ကို, Hjelmstad GO, Fields HL ။ Midbrain dopamine အာရုံခံ: အနာဂတ်ပစ်မှတ်အရေးယူအလားအလာကြာချိန်နှင့် dopamine: D (2) အဲဒီ receptor တားစီးဆုံးဖြတ်သည်။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 8908-8913 ။ [PubMed]
34 ။ McGaugh JL, McIntyre CK, ပါဝါ AE ။ မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီး၏ Amygdala မော်ဂျူ: ကအခြားဦးနှောက်စနစ်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်။ Neurobiol Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2002; 78: 539-552 ။ [PubMed]
35 ။ Popescu ကို AT, Saghyan AA ကို, အ amygdala တို့က corticostriatal plasticity ၏ Pare ဃ NMDA-မှီခိုပံ့ပိုးကူညီ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2007; 104: 341-346 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
36 ။ Rosenkranz ဂျာကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို။ pavlovian အေးစက်နေစဉ်အတွင်းအနံ့-evoked amygdala အလားအလာများ Dopamine-mediated မော်ဂျူ။ သဘာဝ။ 2002; 417: 282-287 ။ [PubMed]